Big City Small World (Series3Episode 12 - Popping the Question) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on October 17, 2013 at 11:12 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series3Episode 12 - Popping the Question (အတွဲ (၃) အပိုင်း (၁၂) လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခြင်း)
Harry is going to ask the very important question and Carlos hasapiece of good news to share. Is it going to beahappy ending?
ဟယ်ရီသည် အလွန်အရေးကြီးသည့်မေးခွန်းကိုမေးတော့မည်ဖြစ်ပြီး ကားလို့စ်မှာလည်း ပြောစရာသတင်းကောင်းတစ်ခုရှိနေသည်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဇာတ်သိမ်းခန်းလေးဖြစ်မှာလား။
Series3Episode 12 - Popping the Question ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
အိုး ဒုက္ခပဲ။ သူကတခြားလူတွေအားလုံးနဲ့။
အို အမ်း ဟယ်လို။
အို အင်း . . . ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး . . .
အိုလီဗီယာ။ ရှူး . . . ဟယ်ရီက မေးခွန်းမေးတော့မလို့။
ဘာမေးမှာ. . .
ငါမလုပ်ရဲဘူး။ အခုမမေးသေးဘူး။ ကော်ဖီဆိုင်ထဲတော့မမေးဘူး။ ငါ အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်စရာကောင်းတဲ့အချိန်လေးစောင့်မယ်။ ငါတို့နှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်။
အိုး ပွဲဖျက်သူရယ်။ တို့ကစောင့်ကြည့်ချင်တာ။
ကဲ ဘင်ယု နင်ဒါကိုသိနေတာလား။
အိုး ဆောရီးပါ။ အဲဒါအစီအစဉ်လုပ်ထားတယ်လို့ထင်ထားတာ။
ကဲ ဘင်ယု၊ ငါနင့်ကိုတစ်ခုမေးစရာရှိတယ် . . .
ဟော သူငယ်ချင်းတို့ ငါသတင်းကောင်းတစ်ခုပြောစရာရှိတယ်။
အာ အမ် အင်း ဟင့်အင်း။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်တော့မယ်။
အဲ အင်း ဘင်ယု။ နင်ငါ့ကိုလက်ထပ်မလားဟင်။
အား . . . ငါဒါကိုမထင်ထားဘူး။
အို ငါ . . အာ အင်း . ငါ . . . ဟင့်အင်း . . အိုး အေးဟာ။
ကဲဆာရာ ငါလည်းငါ့ကိုယ်ပိုင်စားသောက်ဆိုင်ရတော့မှာဆိုတော့ ငါ စဉ်းစားနေတာ. . . ငါတို့ထပ် ကြိုးစားကြည့်ကြမလား။
အေးပါ။ ငါလည်းနင်နဲ့အတူရှိခဲ့တဲ့အချိန်တွေကို လွမ်းတယ်။ အင်း အခု နင့်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး ရှိပြီဆိုတော့အရမ်းဝမ်းသာတယ်။
ငါလည်း ငါ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးရှိပြီ။ “FindLondon” က တကယ်အဆင်ပြေနေတယ်။
ငါကောပဲ ငါ့ ဖိနပ်ဆိုင်။
ငါတို့ တစ်ချိန်တော့ အပြင်ထွက်လည်ကြတာပေါ့။